Guddoomiye Abshir Bukhaari oo sheegay in si dhab ah looga dhabeeyo metelaada haweenka ee Doorashooyinka – Kalfadhi
May 9, 2020 May 9, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiye ku-xigeenka Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya Abshir Axmed Buqaaari, ayaa bulshada iyo siyaasiyiinta ugu baaqay in laga dhabeeyo doorka metelaada haweenka ee siyaasada iyo in ay ka qeyb-gallaan doorashooyinka dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in haweenka Soomaaliya wax-qabadkooda horay loosoo arkay islamarkaana, door muhiim ah ay ka qaadan karaan qeybtooda siyaasada.
“Siyaasadda Soomaaliya waxaa hareysay mab’da dibnaha saaran ee aan jirin qalbiga oo aysan dadku aaminsaneen. Odayaasha dhaqanka, culaa’udiinka waxaan ugu baaqayaa in si dhab ah looga dhabeeyaa metelaada haweenka ee ah in haweenka ay ka qeyb-gallaan doorashada oo ay helaan kuraas ay ku meteli karaan qeybta ay kaga jiraan bulshada”.
Mudanaha, ayaa haweenka ka rajeeyay in ay kaalintooda heli doonaan iyagana ay kaalintooda ay kasoo bixi doonaan. Waxaa uu si gaar ah uu ugu baaqay haweenka in ay muujiyaan midnimo ay ugu dagaallami karaan doorkooda iyo qeybta ay leeyihiin.
Haweenka ku jira siyaasadda iyo kuwa uu hankoodu yahay ka mid noqoshada siyaasadda oo kulamo ku kala lahaa dalka iyo dibadiisa, ayaa muujiyay sida xuquuqdooda aysan uga helin siyaasadda iyo in doorkooda la xaqiray.
Aqalka Sare ee Baarlamaanka, ayaa keliya waxaa ku jira 15 gabdhood, halka Aqalka uu ka koobanyahay 54 xildhibaan.